The Essence: May 2009
King Dhammazedi's bell may or may not be lost forever, but even if it is, the world's largest accessible and ringing bell is still not in Russia.
The Tsar-Kolokol III
The world's largest bell is the Tsar Bell III (Tsar-Kolokol) in Moscow. It is called Tsar Kolokol "III" because it was cast three times, and more metal was added each time. The present incarnation was cast in 1733-35, and weighs about 400,000 pounds (180 tons).
Resting at the foot of the Ivan Velekij Bell Tower, the bell isamute testimony to the grand days of the Romanov Dynasty— and to the weakness of all human endeavor. Tsarina Anna I commissioned the bell in 1734, fulfilling the dream of her grandfather, Tsar Alexei. At 6.14 meters high and 6.6 meters in diameter, it was to be the biggest and clearest sounding bell in the world.
The casting of this enormous bell was performed byateam of nearly 200 craftsmen under the supervision of Ivan Motorin and his son Mikhail, who cast many of Russia's other great bells.
Their crowning achievement was destined only for tragedy, however. During the great fire of 1737 it still lay in its casting pit, and burning timber from the structure above it fell into the pit. Bronze hasarelatively low melting point, so the question was whether to let it burn and risk melting it, or to pour water on it and risk cracking it by cooling it too fast. The latter risk was chosen and, as feared, because of uneven cooling, the red-hot bronze did crack andachunk weighing 11.5 tons broke off. This chunk alone weighs more than most bells in the world.
The broken Tsar Bell remained in the earth for almost 100 more years after that, until the architect Auguste Montferrand raised it in 1836 and placed it on its present granite pedestal. The surface of the bell is finely worked in relief with decorative patterns, embossed pictures, and inscriptions.
Sadly, two hundred tons of silence are all that remain. Foratime, the bell served asachapel. There has apparently been some talk of recasting it. Some Old Believers are of the opinion that this would beabad sign, as this bell is slated to ring Blagovest on Judgment Day!
Cannons and bells have always hadacurious relationship— bells are melted down to make cannons in times of war, and cannons are melted town to make bells in times of peace. So we ought to mention that just outside the Kremlin's Cathedral Square where the Tsar-Kolokol sits, you also find the stunningly huge cannon pictured at the right. The Tsar Cannon, built in 1586, is considered the largest cannon in the world, sixteen feet long, weighing 85,000 pounds, withacaliber of 890 mm. Tsar Theodore I, Ivan the Terrible's son, commissioned master bronze craftsman Andrei Chekov to cast the giant bronze weapon to better protect the Kremlin.
The Tsar Cannon is thus quiteabit older than the Tsar Bell. The gun carriage and the cannon balls lying nearby are decorative, for the cannon itself was designed to fire not cannon balls but grapeshot. However, in actuality, it proved to be impractical to use.
Posted by အလင်း စက် at 6:30 AM0comments
ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့2(06/27)
Posted by အလင်း စက် at 12:40 PM0comments
Labels: myanmar books
ဒီနေ့မြန်မာကဗျာတွေကို ကြည့်ရင်း စီးကြောင်းသုံးသွယ်နဲ့စီးေ မျာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
(၁) ရှေးရိုးစဉ်လာကဗျာစီးကြောင်း (ဂန္ထ၀င်ကဗျာပုံသ ဏ္ဍာန်)
(၂) လွတ်လပ်ကာရန် ကဗျာစီးရေကြောင်း (တချို့က မိုးဝေကဗျာလို့ ဆိုကြပါတယ်။)
(၃) ဒီနေ့ ခေတ်ပေါ်မြန်မာကဗျာသစ်စီးကြောင်း စတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီအထဲ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ် တိုးတက်လာနေတဲ့ ခေတ်ပေါ်မြန်မာကဗျာသစ်ကိစ္စ ကိုပဲ ဦးတည်ပြောချင်ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ်မြန်မာကဗျာသစ်ကို တချို့က 'မော်ဒန်' ကဗျာလို့ဆိုပြီး၊တချို့က ' ကာရန်မဲ့ကဗျာ ' လို့ဆိုကြ ပါတယ်။ Modern ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာလို 'ခေတ်ပေါ်' လို့လည်း ပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 'ကာရန်မဲ့ကဗျာ' ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း ဆန်းစစ်ဖို့လိုမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ကာရန်မဲ့ကဗျာဆိုပြီး ကျွန်တော် စတွေ့မိတာကဆရာ ဒေါင်းနွယ်တွေရဲ့ 'ကဗျာပုလဲကုံး' ကဗျာစာ အုပ် ထဲက-
‘ စောင်းသမား လေမုန်တိုင်း’ ကဗျာပါပဲ။
( ‘ မင်းနဲ့ငါ မတွေ့နိုင်တော့ဘူး အချစ်ရယ်။
ကမ္ဘာအဆုံး မယုံနိုင်ဘူး မောင့်သဲရယ်’ )
ကဗျာရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဆရာ ဒေါင်းနွယ်ဆွေက ဒီလို မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
(ကာရန် မပါသော ကဗျာနု စာညွန့်ဝတ္ထုကဲ့သို့ ရေးသားသီဖွဲ့အပ်သဖြင့်ထိုစပ်နည်းကို
‘ကာရန်မဲ့ကဗျာ’ ဟုစမ်းသပ်အမည် ပေးရခြင်း ဖြစ်လေသည်) တဲ့။
ဆရာဒေါင်းနွယ်ဆွေတို့ခေတ် (၁၉၅၀ လွန်စာပေ သစ်၊ကဗျာသစ်ခေတ်)
တချို့ကဗျာ ဆရာတွေဟာ ကဗျာပုံ သဏ္ဍာန် အသစ်ဆန်းတွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ (တီထွင်နိုင်ခြင်းတော့ မရှိခဲ့ကြပါဘူး။)
ဒါပေမဲ့ ဆရာ ဒေါင်းနွယ်ဆွေရဲ့ ဒီ ကဗျာကတော့ ကာရန်လုံးဝ မပါသလောက်ပါပဲ။
ဒီတော့ မြန်မာကာရန်မဲ့ ကဗျာအစ ဒေါင်းနွယ်ဆွေက လို့ပြောရမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆရာ ဒေါင်းနွယ်ကိုယ်တိုင်က ဒီကာရန် မဲ့ကဗျာပုံသဏ္ဍာန် ကိုစမ်းသပ်ရုံသာ စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ကဗျာပုံသဏ္ဍာန် တစ်ခု အဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆက်လက်မရေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီကဗျာတွေစတင်ဖြစ်ထွန်းခါစက ကဗျာလောကမှာ တော်တော်ကို လှုပ်ခက်သွားပါတယ်..။
ကဗျာဆရာတွေ အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ကြပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ
တစ်ဖြည်းဖြည်းလူငယ်တွေကြား နေရာယူလာတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်၊၊တွေ့သမျှလေး တင်ပြတာပါ၊၊
Posted by အလင်း စက် at 12:12 AM0comments
ဘဝ၏ ရှူပ်ထွေးတင်းကြပ်မှူကို အားဖြည့်ပေးသည်..။
သင်၏ အခန်းအတွင်း စနစ်ကျ သပ်ရပ်နေပါစေ။
သင်၏ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကိုတော့ မည်သည့်နေရာ မဆို
တခါတရံ၌ စနစ်မကျသော ရှူပ်ထွေးမှူသည်
နွေးထွေးမှူကို ပို၍ ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်..။
Posted by အလင်း စက် at 11:57 PM0comments
သဘာဝအလှအပများ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားလိုက်ပါဘိ။ ငေးမဆုံး ကြည့်မဆုံး ကြည့်သူသာ အရှုံးပေးရပါ၏။ သဘာဝက ဖန်ဆင်းပေးထားသည့် ဆေးရေးပန်းချီကားချပ်ကြီး တစ်ခုပေါ့။ ဒေသခံများ၏ လှုပ်ရှားသွားလာပုံ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ၊ နေထိုင်မှုအကျင့်၊ ဖော်ရွေတဲ့ အပြုံးလေးများကလည်း ကဗျည်းတင်လောက်စရာပါ့။ လာသမျှဧည့်၊ လာသမျှ ဆွေသဟာများကို နွေးထွေးသော ကြိုဆိုမှုလေးတွေနဲ့ အပြည့်ပေါ့။ ပတ်ပတ်လည်မှာလည်း လွမ်းမောဖွယ်တောင်တန်းကြီးတွေ ၀န်းရံလျှက်။ မြေပြန့်မှ ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ခံစားမိလေရဲ့။
ထိုနေရာလေးတွေရဲ့ အနောက်တောင်ဆီမှာဆိုလျှင် မြင်သူမရိုးနိုင်လောက်အောင် ရှုမငြီးဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ အင်းလေးဟု ခေါ်တွင်တမုဒ်ထားတဲ့ အင်းလေးကန်ကိုလည်း တမြေ့မြေ့ခံစားငေးမောမိလေရဲ့။ ၎င်းဒေသမှာနေ အင်းလေးသူ၊ အင်းလေးသားတွေရဲ့ ဗမာစကားခတ်ဝဲ၀ဲအသံ လေးတွေကလည်း နားဝင်ချို နှစ်သက်စရာကောင်းပါဘိ။ မော်တော်ပေါ်စီးရင်း ရေလှိုင်းလေးတွေရဲ့ ဝေ့ကာဝိုက်ကာ ကစားနေကြဟန်နှင့်အတူ ရေပျော်ဇင်ယော်ငှက် လေးတွေရဲ့ မြူးတူးပျော်ရွှင်နေကြပုံကလည်း ချစ်စရာမြင်ကွင်းတမျိုးပေါ့။
နေထွက်စပြု မြူမှုန်လေးတွေရဲ့ကြားမှာ ၀မ်းရေးအတွက် လှေငယ်လေးတွေကိုယ်စီနဲ့ တံငါသည်လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားနေပုံလေးတွေရဲ့ မြင်ကွင်း ကလည်း ရင်သက်ရှုမောအံ့သြ လောက်ပါပေဘိ။ လွမ်းမောဖွယ် နေ၀င်ဆည်းဆာချိန်လေးဟာလည်း အင်းလေးကန်ရဲ့ ရှုမငြီးဖွယ်အလှနှင့်အပြိုင် ခန့်ညားနေလေရဲ့။ ဝေးကွာစဉ်တခဏ ချစ်သူကိုပင် ပြန်လည် အောက်မေ့မိလောက်အောင်ပင်။
၎င်းအင်းလေးကန်ကို ဖြတ်ကျော်သွားမိပြီဆိုလျှင်ပဲ အင်းလေးနေဒေသခံများ၏ ကိုးကွယ်ဖူးမျှော်ရာ ဖောင်တော်ဦးဘုရား ကျောင်းတော်ရာကြီး ကိုလည်း ဖူးမျှော်နေရမည်သာ။ မြန်မာနိုင်ငံ သာမက ကမ္ဘာရဲ့ အလှပဆုံးနေရာလေးတွေထဲမှာ သူလည်းအပါအ၀င်လေ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သည်တွေ ဆုံးဆည်းရာ နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။
ထိုသို့သာယာလှတဲ့ မောမြေရဲ့ ညောင်ရွှေ၊ အင်းလေး ဒေသလေးကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ဘယ်သောအခါမှ မေ့ဖျောက်လို့ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာနေလူတန်းစား အားလုံး သွားသင့်သွားထိုက် ရောက်သင့်ရောက်ထိုက်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ညောင်ရွှေမြို့နှင့်အတူ အင်းလေးကန်ရဲ့ ရှုမငြီးဖွယ်အလှအပမြင်ကွင်းတွေကလည်း ရောက်ရှိလာဧည့်အပေါင်းကို လက်ကမ်းကြိုဆိုနေမည်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by အလင်း စက် at 8:50 AM0comments
ရွှေခဲ ကြက်တူရွေး။ ။
မတူလို့ မတုနိုင်တဲ့ အခါတွေမှာ
လူတွေမှာ မတူညီတဲ့ စွမ်းရည်၊အတတ်ပညာ၊အရည်အချင်းတွေရှိနေပါတယ်၊၊
သူများမှာ ရှိတာ ကိုယ့်မှာ မရှိလို့ဆိုပြီး၊ စိတ်အားငယ်စရာ မလိုသလို၊ကိုယ့်မှာ ရှိတာ သူများမှာ မရှိလို့လဲ
ဘ၀င်မြင့်စရာ မလိုဘူးဆိုတာကို ပြောတဲ့ ကဗျာလေးပါ၊၊ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေး ရေးစပ်ထားပေမဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေး
နက်လှပါတယ်၊၊ ရွှေခဲလေးနဲ့ ညီပုလေးဆိုပြီး ဇာတ်ကောင်ပြထားတာက Symbolism လို့ခေါ်ပါတယ်၊၊
ကလေးကဗျာဆိုပြီး နိမ့်တယ်ထင်ရင်တော့ မှားမှာပါ၊၊တခါတလေ သူတတ်တာ ကိုယ်မတတ်၊
သူ့မှာရှိတာ ကိုယ့်မရှိ၊ အခြေအနေမျိုးတွေ ဇြစ်နေတတ်ပါတယ်၊၊ဒါကို ရည်ရွယ်ပြီး ဆရာကြီးက ဒီကဗျာလေးကို
(ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ရေးသားခဲ့ပြီး ဆရာကြီးဦးဘဉာဏ်ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာ
အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာပြန်သူ ပါမောက္ခ လုစ်
(မောင်ခွေးဖို့ ကဗျာများ စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ် တင်ပြပါသည်။)
Posted by အလင်း စက် at 1:58 AM0comments
ဘဝတွင် ကြီးမားသော တိုက်ခိုက်ခံရမှု့တို့နှင့် တွေ့ကြုံရသော အခါများတွင် အားမာန်အသစ် အသစ်တို့ကို
မွေးဖွားပေးသော ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာကြီးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ၊၊ ၊၊
Posted by အလင်း စက် at 12:08 AM0comments
လှေကိုပြင်ပါ့၊ ကူးတို့မှူး၊၊ ၊၊
(မင်းသုဝဏ် . ၁၉၈၄)
Posted by အလင်း စက် at 1:24 AM0comments